ch7ယောဟန်သည် – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ယောဟန်၏ဧဝံဂေလိတရားကို / ch7ယောဟန်သည်
7:1 ထိုအခါ, ဤအရာတို့ကိုအပြီး, Jesus was walking in Galilee. For he was not willing to walk in Judea, because the Jews were seeking to kill him.
7:4 ဒါပေါ့, no one does anything in secret, but he himself seeks to be in the public view. Since you do these things, manifest yourself to the world.”
7:6 ထို့ကြောင့်, ယေရှုက: “My time has not yet come; but your time is always at hand.
7:11 ထို့ကြောင့်, the Jews were seeking him on the feast day, and they were saying, “Where is he?"
7:14 ထိုအခါ, about the middle of the feast, Jesus ascended into the temple, and he was teaching.
7:15 And the Jews wondered, ဟုဆို: “How does this one know letters, though he has not been taught?"
7:21 ယရှေုသညျထိုသူတို့အားတုံ့ပြန်ဟု: “One work have I done, and you all wonder.
7:25 ထို့ကြောင့်, some of those from Jerusalem said: “Is he not the one whom they are seeking to kill?
7:26 ထိုအခါ, he is speaking openly, and they say nothing to him. Could the leaders have decided that it is true this one is the Christ?
7:28 ထို့ကြောင့်, Jesus cried out in the temple, teaching and saying: "ကျွန်တော့်ကိုသင်သိပါသလား, and you also know where I am from. And I have not arrived of myself, but he who sent me is true, and him you do not know.
7:30 ထို့ကြောင့်, they were seeking to apprehend him, and yet no one laid hands on him, because his hour had not yet come.
7:33 ထို့ကြောင့်, ယေရှုက: “Forabrief time, I am still with you, and then I am going to him who sent me.
7:34 သငျသညျအကြှနျုပျကိုရှာကြလိမ့်မည်, and you will not find me. အဘယ်မှာရှိငါဖြစ်၏, you are not able to go.”
7:36 What is this word that he spoke, ‘You will seek me and you will not find me; and where I am, you are not able to go?"'
7:37 ထိုအခါ, ပှဲ၏နောက်ဆုံးနေ့ကြီးပေါ်, ယရှေုသညျရပ်နေနှင့်အော်ဟစ်ခဲ့သည်, ဟုဆို: "မည်သူမဆိုရေငတ်နေလျှင်, သူ့ကိုအကြှနျုပျနှငျ့အသောက်ရန်လာကြကုန်အံ့:
7:38 အကြင်သူသည်ငါ့ကိုယုံကြည်သော, ကျမ်းစာ၌ကပြောပါတယ်နည်းတူ, 'သူ့ရင်ဘတ်ကနေရေနေထိုင်သောမြစ်စီးဆင်းရကြလိမ့်မည်။ ' "
7:39 ယခုသူသည်ဝိညာဉ်ပကတိအားအကြောင်းဒီကပြောပါတယ်, သောကိုယ်တော်၌ယုံကြည်သောသူတို့အမကြာမီလက်ခံရရှိလိမ့်မည်. ဝိညာဉ်တော်သည်သေးပေးထားမခံခဲ့ရများအတွက်, ယရှေုသညျသေးဘုန်းပွင့ဖြစ်ဘူးသောကြောင့်,.
7:40 ထို့ကြောင့်, some from that crowd, when they had heard these words of his, were saying, “This one truly is the Prophet.”
7:41 အခြားသူများကပြောနေခဲ့သည်, “He is the Christ.” Yet certain ones were saying: “Does the Christ come from Galilee?
7:45 ထို့ကြောင့်, the attendants went to the high priests and the Pharisees. ထိုသူတို့ကလညျး, “Why have you not brought him?"
7:50 Nicodemus, the one who came to him by night and who was one of them, ထိုသူတို့အားပြောဆို,